Ongororo - Popular Jewelry
Kubva paongororo dze 262
Solid Dhiragoni Mhete
Priscilla Fuentes (Iyo Bronx, US)
Mifananidzo haiti iyi chidimbu kururamisira
Crystal Goridhe Bhora Stud Mhete (14K)
Yakanaka Yemhando Studs
Ini ndaida peya yemhete yakanaka mhando pamutengo unonzwisisika. Aya ma Stud aive akakwana. Ruzivo rwangu rwepamhepo rwaive rwakakurumidza kuendesa uye heya akatondisheedza kuti ndigadzirise kero yangu. Tichatenga kubva pano zvakare.
Mhuri Puffy Mwoyo Charm Pendant (Sirivheri)
Mhuri Charm Bracelet, Ida icho!
ndakazvitengera sisi vangu kune yavo Popcorn Bracelet, uye inokwana! Bracelet yake yaive 4.2mm!
Akanyorwa Halo Jesu Musoro Pendant (14K)
Javier Morales chinobata mufananidzo (Asbury Park, US)
14k maviri matauriro jesus chidimbu
Chidimbu chekutanga chaive chakadzoserwa kumashure. Vakapa jesus piece wich yaidhura pamutengo mumwe chete.
Aive pano zuva raitevera mushure mekubuda kwechikepe. Zvese zvaive kuburikidza nemutumwa uye zvichiri kuenda zvikuru nekutenda kumutengesi. Chidimbu chaJesu chairema uye chakasimba. Ndakaifarira zvirinani pane chidimbu chakadzorerwa kumashure. Yakakurudzirwa. Unofanira kuva mwoyo. Mukuru mutengesi.
Solid Mbiri-Toni Curb / Italian-Cuban Batanidza Chain (14K)
CATHERINE RIVERA (Nyowani Port Richey, US)
RUDO RANGU CHAIN
Popular Jewelry zvakaita kuti zvive nyore kwazvo kwandiri kuti ndironge ngetani yangu online. Kutaurirana kwaive kwakatanhamara. Ndakavaudza zvandaitsvaga uye vakandizadzisa zvandaida. Yangu 14K Goridhe Chain yakakwana. Ndinochida kwazvo. Ndakagamuchira cheni yangu mukati mevhiki imwechete yandakaraira. Yakanaka Vatengi Sevhisi. Waita hako
Ndakakurira muBrooklyn, NY uye zvishongo zvangu zvese zvakatengwa muCanal St kuManhattan, NYC Ini zvino ndogara kuFlorida uye handife ndakatenga 14k goridhe muFlorida. Kana ndichida goridhe, NDICHAITENGA chete Popular Jewelry. Ndinokutendai Vakomana Kune Zvese.
Basa rakakura !!
Kevin aibatsira kwazvo nekundibatsira kuti ndive nechokwadi chekuti pendant yangu yaive kune zvandinoreva. Ipapo ndakaiwana mutsamba zuva raitevera! PJ ndiyo chete nzvimbo yandichatora zvishongo zvangu kubva, uye nechikonzero chakanaka.
Solid Italian Cuban / Vhura Curb Chain (14K)
Inoshamisa Pendant / Chain uye Inoshamisa Service 5/5 STARS
Kevin naWilliam vaibatsira zvisingaite uye vainditsigira nemibvunzo yangu yese nezve yangu chindori neketani (kureba kwakasiyana, ngetani, pendendi, hukuru, nezvimwewo)
Kana iwe uri kutsvaga kutenga zvimwe zvishongo, ino ndiyo nzvimbo yekuita kudaro. Iwe unozopindurwa yese mibvunzo yako uye zvidimbu zvakaisvonaka. Ini ndichave ndichidzoka kuzotenga zvimwe zvishongo. (Usatya kutya kubvunza pamhete kana cheni dzinotengeswa!)
Pane chikonzero chaunofarira mashopu emhizha pa Popular Jewelry! Ndatenda zvakare Kevin naWilliam nekugadzira yangu kutengeserana yakatsetseka uye kupindura yangu yese mibvunzo!
Bhora mhete Mhuno Kubaya (14K)
Vakandiudza kuti ndibhadhare $ 75 yegoridhe pini yemhino vachibva vandicheka $ 75 kwandiri ndokundipa pini yemhino yekunyepedzera. Saka chitoro chakashata. Ivo vanoba mari kune vanhu vakaraira kuunganidzwa kwavo online.
Mhoro Samia! Iwe waizokwanisa here kutizivisa iwe kuti wakapedzisa sei yedu yekuboora mhuno kuve yekunyepedzera? Kubva panguva yedu yekuvhura (1988) kusvika nhasi hatisati tambobata nesimbi yemapfekero; pane 0% mukana wechero musanganiswa urikuitika saka tinoda kunzwa divi rako renyaya. Kana yakamakwa sa14K- iwe unogona kubheja zvechokwadi kuti wakagamuchira 14K yegoridhe mhete mhete.
Dhaimondi-Cheka Hockey Zvimiti & Puck Pendant (14K)
Zvakakwana. Ndichatenga newe zvakare.
Egypt Pyramid Diameki Cheka Pendant (14K)
Jorodhani R (Norcross, US)
Haikwanise kukumbira pendenti iri nani
Kevin nevanhu vese kumusoro Popular Jewelry akanyatsonditarisira uye akaita shuwa kuti ndagamuchira odha yangu ASAP. Yakauya nekukurumidza uye ndinotenda chaizvo nechidimbu changu. Thanks 🤲🏽
Razarus Pendant (14K)
Ini ndaive ndisina basa nemabatiro andaiitwa & ini handina kutambira mari yangu yakazara zviripachena unofanira kuti uverenge zvakadhindiswa vakawana nyeredzi imwe nekuti hapana zero asi unowana zvigunwe zvina pasi
Hei ipapo Marqueeta! Kuti utsanangure- mari yekudzoreredza iri munzvimbo sevashandisi vekubhadhara (kureva. Makambani emakadhi echikwereti; PayPal) anotibhadharisa mari isingadzoreke nguva yega yega mutengi paanotibhadhara. Uyezve pane mari inosanganisirwa neyekutumira uye inishuwarenzi; iyo nguva / basa rinodiwa kugadzirira uye kuzadzisa odha yako. Izvi zvinodhura zvinowedzera kusvika panosvika 15% yemutengo wese wechidimbu; saka iyo 15% chiyero chemubhadharo.
Kupesana nezvaunoreva isu tinoda chaizvo kuti vatengi vazive nezvavari kutenga; hapana munhu anoda kubhadhara mari idzi uye hatidi kumanikidza kune edu vatengi futi! Neichi chikonzero, zviyero chaizvo zvehukuru hwechidimbu zvakanyorwa mune yayo peji peji; isu zvakare tine zano pane peji rega rega re-e-mail chero mibvunzo zvine chekuita nesize pamberi pekutenga. Ndiri kunyatsoteerera!
Sezvo isu tine peji rizere rakatsaurwa kune yedu kudzoka mutemo uye ini handigone zvine musoro kutaura kuti inoita kunge akanaka kudhinda. Vabhadhariri processor vanobatana nemutengi zvakanyanya chero paine kusahadzika kunonzwisisika asi panguva ino, vakasimudzira muripo (zvichireva kuti vaitenda kuti zvaive zvakanaka.) Ndokumbira unzwisise!
Iced-Out plug Pendant Sirivheri
Art Deco Garnet Muchinjika Pendant (14K)
Kunyangwe Zvirinani muMunhu
Yakakura mhando chidimbu uye inotaridzika zvirinani kupfuura iwo mafoto. Chikwata chakabatsira kwazvo munzira yese iyi. Tichave tiri kuwana zvimwe zvidimbu kubva kuPJ mune ramangwana
Mabhokisi eGloves Pendant
Yakakura tsiva kirabhu inoratidzika kunge yepakutanga Goridhe Glove pendant
Best jeweler kumativi
Ndatumira chidimbu changu nechipo bhokisi uye ese 14k goridhe… .Ndanga ndiri mutengi wake kwemakore uye ndicharamba ndiri mutengi wake kweupenyu hwese ... maoko pasi akanakisa jeweler akatenderedza ASAP EVA
Square Furemu Guadalupe Pendant (14K)
Inoita kunge iri nani mumunhu
Ndinochida ndinopfeka zuva nezuva🙏🏾
Akanaka mhete uye pendende !!
Ini ndinoda yangu nyowani cheni uye pendant super inofara neyangu Hero kutenga !!
Spiga / Square Gorosi Chain (14K)
Jas Tea (Washington, US)
Tsika Goridhe chishongo chine pendant
Iko chishongo uye pendende yaive yakakwana! Kunyatsoteerera ndaifara kwazvo
Miami Cubanlink Chain Siri (Yero)
akaita chipo chakanakira hama yangu mudiki, akashamisika kwazvo. waita hako popular jewelry!
Glenn Harris (Iyo Bronx, US)
Iced-Out Ankh Prong Pendant Siliva
Ini ndanga ndisingatarisiri kuti mabwe arove sezvavakaita, yakanaka yakasimba kunzwa pendant ine yakanaka kubwinya kune sirivheri! Inoenda yakakura pane yangu 22in tambo cheni.
Basa revatengi kubva pano raive rakanakisa. Vakanga vasina chaiyo ankh yandakaraira, asi Kevin akandikochekera neiyo hombe, vhezheni vhezheni pasina chekuwedzera muripo! Yakakurudzirwa kuti yall itenge kubva popular jewelry!